The.Night.Before.Enlisting. [2016 ] 18+.HD ~ ဘလော့ခရီးသည်
The.Night.Before.Enlisting. [2016 ] 18+.HD
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အတူတူ ကြီးပြင်းလာတဲ့ သူငယ်ချင်း
သံယောဇဉ် တွေကို ပုံဖော်ပြသထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းထဲ့ကမှ အချစ်ဆုံးသူ တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ သူမဟာ
အဆုံးမှာတော့ ဘယ်သူကို ဘဝလက်တွဲဖော် ရွေးချယ်သွားမလည်းဆိုတာကို
ကြည့်ရှုခံစားရင် ဘဝ အမောတွေ ပြေနိုင်ကြပါစေဗျာ။ 18+ အခန်းအနည်းငယ် ပါဝင်တာကြောင့် မိသားစုနှင့် ကြည့်ရှုရန် မသင့်ပါ။
Subtitle ၊ English File size ၊ 651.5MB